Manavotra aina ny sarontava, saingy lasa olana goavana ihany koa · Global Voices teny Malagasy
Nitombo be ny fako plastika nandritra ny fisian'ilay valanaretina
Mpanoratra The Record (Nepal) Nandika (fr) i Ophélie Douchet, Master TSM Université de Lille, miora
Voadika ny 26 Novambra 2021 6:35 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, Ελληνικά, Français, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aogositra 2021)
Sary an'i Deewash Shrestha tao amin'ny Record Nepal. Fampiasàna nahazoana alàlana
[fanamarihan'ny mpandika: ny rohy rehetra ato dia mitondra mankany amina lahatsoratra amin'ny teny anglisy.]
Ity lahatsoratr'i Prasansha Rimal ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny The Record (Nepal) ary dika nokiraina no naverin'ny Global Voices navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana hifampizara votoaty.
Efa olana sahady ao Nepal ny fitantànana ny fako, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fitsaboana, ary vao mainka miharatsy ny toedraharaha nandritra ny valanaretina COVID-19. Araka ny tatitra iray an'ny Banky Iraisampirenena tamin'ny Septambra 2020, 2.600 taonina ireo fako adoboka isanandro ao amin'ny toerana fanariana fako ao Nepal. Tombanany hoe, amin'ny fitambaramben'ireo fako ireo, ny 56% dia fako mety levona, 16% fitaratra, 8% taratasy ary 13% plastika. Kanefa, hatramin'ny niantombohan'ilay valanaretina, lasa hita niely eny rehetra eny ireo zavatra vita avy amin'ny plastika (ireo fitaovana tsy fampiasa afa-tsy indray mandeha, fitaovana fiarovantena ho an'ny tsirairay (EPI), sarontava fitondra mandidy, fanakonana ny tava, ny fonon-tànana, sns..).
Tsy hoe fotsiny tena ilaina be amin'ny fampihodinana ny toeram-pitsaboana sy ho fiarovana ireo mpiasa eny ambava-ady ireny vokatra ireny, fa koa lasa fampiasa andavanandro any an-tokantrano satria lasa mandeha ho azy ny mametaka sarontava alohan'ny hivoahana ny trano. Saingy, arakaraky ny ampiasana arontava, fonon-tànana, aron'akanjo sy harona fanary, dia mihamaro ihany koa ny fako ariana.
Raj Krishna Shrestha, 52 taona, misotro dite eo am-piandrasana ao anaty fiarabeny ireo olona ho avy hanary ny fako avy any an-tokantranony. Isamaraina amin'ilay vao misandratr'andro, mamily ny fiarabeny izy avy ao Balkumari hatrany Lagankhel, miato manoloana ny hôpitaly Patan ary miandry hanangona ireo fakon'ny omalin'io. Avy eo, lasa mitety ny manodidina manangona fako misimisy kokoa alohan'ny hanariana azy ireny ao Balkumari.
Toy izany ny andavanandron'i Shrestha. Ho azy, tsy dia nisy zavatra niova hatramin'ny niantombohan'ny valanaretina, ny hany zavatra tokana niova dia ireo fako angoniny isanandro: betsaka kokoa ankehitriny ny fako plastika.
Araka ny fanadihadiana iray tamin'ny Febroary 2021, hatramin'ny nanombohan'ilay valanaretina, niteraka fako 1,6 tapitrisa taonina isanandro ny fako plastika manerana ny tany. Tombanan'ilay fanadihadiana ihany koa ho 3,4 lavitrisa ireo sarontava sy fiarovana tsy fampiasa afa-tsy indray mandeha no ariana isanandro. Hoy ireo mpanoratra, natsimbadiky ny COVID-19 ny fientanan'ny ady erantany natao nandritra ny taona maro hiadiana amin'ny fako plastika. Tombanan'ny Grand View Research, kabinetra fakankevitra momba ny raharaha iraisampirenena fa nipoaka be (nandroso be) ny varotra sarontava fanary, 800 tapitrisa dolara amerikàna tamin'ny 2018, lasa 166 lavitrisa dolara amerikàna tamin'ny 2020, izay tsapa tamin'ny fitomboan'ny habetsahan'ny fako.
Ampahany hita maso amin'ny olana ihany izany. Tsy ny habetsahan'ny fako vokatra ihany no mampanahy, fa koa ny tsy fahaizana mitantana ny fandevonana azy ireny. Ho an'ireo olona toa an'i Shrestha miasa amin'ny sehatry ny fako, nitombo ny tahotra ho voan'ny aretina:
Tsy sarahan'ny olona ny fako mety lo sy ny tsy mety lo avy any an-tokantrano. Zavadoza ho anay izany ary mampiseho mibaribary fa tsy sainin'ny olona ny momba izay hiafaran'ireo sarontava na fonon-tànana avy nampiasainy sady efa misy aretina. Mampiseho ihany koa izany fa tsy dia raharahain'ny olona loatra ny asanay na izay fiarovana anay
Nasehon'ireo fanadihadiana marobe fa afaka mivelona mihoatra ny 72 ora eo ambonin'ny plastika ny viriosin'ny COVID-19 ; ary ny fampiarahana ny sarontava sy fonon-tànana efa niasa amin'ireo fako an-tokantrano hafa dia mety hanamafy ny rojom-pamindràna.
« Tena nitombo be tokoa ny habetsahan'ireo sarontava fampiasan'ny mpitsabo sy ireo fako hafa avy amin'ny plastika. Indraindray, mampahatahotra ny hitsimpona ireo sarontava fampiasan'ny mpitsabo satria tsy fantatrao hoe iza no mety ho nampiasa azy iny. Nefa izahay tsy afaka ny hijanona tsy hiasa. Tsy maintsy miahy ny ankohonanay izahay », hoy ny fanamafisan'i Urmila Deula, mpamafa làlana, 40 taona, voatendry hisahana ny faripiadidian'i Lalitpur.
Sary an'i Deewash Shrestha tao amin'ny Record Nepal. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Manazava i Dr Buddhi Sagar Poudel, mpitondra tenin'ny ministera miandraikitra ny ala sy ny tontolo iainana :
Aty Nepal, tsy mbola vita kajy ny angondrakitra momba ny fitomboan'ny fampiasàna plastika nandritra ny valanaretina, noho ny tsy fahampian'ny ho enti-mànana sy ny mpiasa. Kanefa, azo ambara tsy isalasalàna fa nitombo ireo fako plastika hatramin'ny niantombohan'ny valanaretina, raha tsy hijery afa-tsy ny fitomboan'ny fampiasàna isanandro ireo sarontava fitondra mandidy, ny fonon-tànana ary ireo tavoahangim-panafody.
Ankoatry ny tsy fahampian'ny mpiasa sy ny tetibola ho entina manavaka ny fako, misy olana iray goavana kokoa : tsy ampy fanentanana loatra amin'ny resaka fandevonana fako ny olona.
« Tsy sainin'ny olona ny hanavaka ny fakon-dry zareo ka, araka izany, ireo zavatra toy ny sarontava sy fonon-tànana dia mivantana avy hatrany any anaty fanariampako », hoy ny nambaran'ny Dr Poudel.
Misy ny lalàna voapetraka, toy ilay lalàna momba ny fitantànana ireo fako mivaingana (Solid Waste Management Act 2011) manery ny tsy maintsy hanavahana ny fako, sy ireo taridàlana tamin'ny 2014 momba ny fitantanana ireo fako avy amin'ny toeram-pitsaboana (Health Care Waste Management Guidelines 2014) izay manoro ny amin'ny tokony tsy hampifangaroana ny fako tsy misy atahorana hiaraka amin'ireo karazana fako hafa avy amin'ny toeram-pitsaboana, fa mba handevona avy hatrany azy ireny.
Ireo hôpitaly goavana toy ny Bir Hospital, hôpitaly oniversitera ao Tribhuvan, sy ny Patan Hospital, dia mahavita mandevona tsara ireo fako ao aminy, satria ananan-dry zareo ny fitaovana. Ireo hôpitaly tsy miankina toy ny Alka ao Lalitpur dia manandrana ihany koa manaraka izay zotra izay.
« Atokanay toerana ireo fako medikaly nisy nifandraisany tamin'ny COVID-19 mba hampihenana ny mety hiparitahan'ny viriosy amin'ny alàlan'ireny fako ireny », hoy i Navaraj Thapa, tomponandraikitry ny labaoratoara ao amin'ny Alka Hospital.
Saingy tsy ny hôpitaly rehetra no nanaraka ireny taridàlana ireny, ary tsy miasa loha amin'izay hanavaka fako izany akory ireo tokantrano sy tomponandraikitra eny an-toerana.
Sarkar Bir Shrestha, tomponandraikitry ny toerana fanariampako ao Okharpauwa, manamafy fa :
Namoaka toromarika izahay nitakiana ny tsy maintsy hitazonana mitokana mandritra ny 72 ora ireo fako an-tokantrano izay mety hitondra aretina, toy ireo sarontava fitondran'ny mpitsabo, ny fitafiana, na ireo fitaovana hafa nampiasain'ireo olona tratry ny Covid-19, alohan'ny hampiarahana azy ireny amin'ireo karazana fako hafa ihany avy ao an-tokantrano. Saingy tsy ananantsika ny rafitra voapetraka mba hijerena raha manaraka ny torolàlana nomenay ny olona.
Vahaolana tsotra ho an'ity olana ity ny fandraisana safidy azo antoka sy maharitra ary manaja ny tontolo iainana fa tsy ny plastika. Mety hanampy ireo sarontava vita amin'ny lamba azo sasàna sy azo averina ampiasaina indray. Misy voka-pikarohana iray momba ireo sarontava nahitàna fa ny vokatra vita tamin'ny lamba manana 300 TPI (threads per inch / filets par pouce) dia mahomby 80% isanjato amin'ny fibahanana, izay efa manome sahady fiarovana tsara amin'ilay viriosy. Manoro hevitra hafa ihany koa ilay voka-pikarohana mba ho solon'ireo sarontava fanary : ny fampiasàna sarontava vita amin'ny vovondandihazo roa sosona, na vita lamba filanelina manana 100 TPI raha kely indrindra. Araka ilay tatitra, ny sarontava iray manana sosona maro mifanentana tsara, ampiarahana amin'ny sosona vovondandihazo 600 TPI ary sivana “electrostatic” iray, dia ahitàna fahombiazana mihoatra ny 90 %, azo ampitahaina amin'ny an'ireo sarontava N95.
« Ankoatra ny fandrisihana ny olona hampiasa sarontava vita amin'ny lamba, vahaolana hamahàna ny olan'ny fitomboan'ny fako plastika ny fandoroana ireo fako medikaly na fanariana tsara azy ireny any amin'ireo toerana fanariampako voarindra», hoy ny nambaran'ny Stuti Sharma, tomponandraikitra misahana ny fiarahamiasa sy ny adisisika ao amin'ny Doko Recyclers.
Fa mandritra ny fotoana maharitra, hoy ireo manampahaizana manokana, ilay fotokevitry ny 3R « reduce, reuse, recycle (Mampihena, Mamerina Mampiasa, Manodina) » no sisa tavela ho hany fomba maharitra hiadiana amin'ny fitomboan'ny loto plastika. Tsy maintsy mitondra ny anjara birikintsika isika tsirairay, olontsotra, fikambanana, hôpitaly ary tomponandraikitra eny an-toerana.
« Avo be ny taha mety hiparitahan'ny Covid-19 rehefa tsy ny fiarahamonina no mandray anjara », hoy ny fanambaràn'i Prakash Pathak, tale jeneralin'ny Scrap Recycle Foundation, orinasa iray miasa manokana amin'ny fitantanana ny fako. « Tokony hanolotra safidy hafa hasolo ny EPI sy ireo sarontava fampiasan'ny mpitsabo ry zareo manampahefana, satria izany dia ahafahana mampihena ny famokarana plastika any am-piandohany. Nefa, mbola mavesadanja kokoa, mila fotsiny ny tsirairay mandray ny andraikiny amin'ny fanavahana tsara araka ny tokony ho izy ny fakony. »
Nandika (fr) i Ophélie Douchet
Nandika (fr) i Master TSM Université de Lille